Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Oktobra 2019 à 04:54
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Oktobra 2019 à 04:49 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Oktobra 2019 à 04:54 (hanova) (esory)
Ny fiangonana kristiana dia nanana fanekamfiekem-pinoana izay mamaritra ny maha [[Kristianina|Kristiana]] ny olona iray. Ho an'ny Kristiana, ny fanekem-pinoana voalohany dia ny [[kerigma]], fanambaram-pinoan'ny Kristiana voalohany:
* ''matyMaty sy nitsangana izy ary izay milaza izany dia mijoro ho vavolombelona amin'ny tenany manokana;''
* ''miantsoMiantso ho amin'ny fibebahana izy.''
==== Ny fanekem-pinoana kristiana amin'izao fotoana izao ====
Maro ny fanekemfiekem-pinoana kristiana fa ireto no iraisan'ny ankamaroan'ny Kristiana amin'izao fotoana izao, dia ny [[Fanekem-pinoana apostolika]] sy ny [[Fanekem-pinoana nikeana|Fanekem-pinoan'i Nikea-Konstantinopoly]] ary ny [[Fanekem-pinoana atanaziana|Fanakem-pinoan'i Atanazy]]. Ny Fanekem-pinoana nikeana sy ny FanekamFanekem-pinoana apostolika dia samy nekena tamin'ireo [[Konsily]] momba ny [[Trinite]], ka ireto ny roa voalohany izay fohifohy kokoa:
Atao hoe koa "fanekem-pinoan'i Nikea sy i Konstantinopla" io fanekem-pinoana io. Toy izao izany araka izay ampiasain'ny [[Fiangonana Loterana Malagasy]] azy<ref><small>Io ihany ny an'ny [[Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara]] fa saingy ny hoe "Jesosy" dia nosoloana "Jesoa".</small></ref>:
<small>"Izaho mino an’[[Monoteisma|Andriamanitra Tokana]], Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Izaho mino an’i [[Jesosy]] Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; Andriamanitra avy amin’Andriamanitra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noharina; miray Sobstansa (izay maha-Izy Azy) amin’ny Ray; amin’ ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny [[Fanahy Masina]] tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Izaho mino ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany; sady mino koa ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Izaho manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amena".</small>
Toy izao kosa izy ao amin'ny [[Fiangonana Katolika Apostolika eto Madagasikara]]:
<small>"Izaho mino an'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesoa Kristy Tompo tokana, Zanaka lahi­tokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohan'ny taona rehetra: Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, Fahazavana avy amin'ny Fahazavana, Andriamanitra marina avy amin' Andriamanitra marina; nateraka Izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny Ray, ary Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra. Ary naka nofo tamin'i Maria Virjiny Izy, noho ny herin'ny Fanahy Masina, ka tonga olombelona; nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa, tamin'ny andron'i Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina ; nitsangan-ko velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, niakatra any an-danitra dia mipetraka eo an-kavanan'ny Ray; mbola ho avy amim-boninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Izaho mino ny Fanahy Masina, Tompo Loharanon'aina, avy amin'ny Ray sy ny Zanaka; tsaohina sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Izaho mino ny Eglizy, iray, masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mankatò ny [[Batisa|batemy]] tokana ho fanalana ny fahotana. Ary izaho miandry ny hitsanganan'ny maty sy ny fiainan-ko avy. Amen".</small>
==== Ny FanekemFiekem-pinoana apostolika ====
Toy izao ny fanekem-pinoana apostolika araka izay ampiasain'ny Fiangonana Loterana Malagasy:
<small>"Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho; ary mino an’i Jesosy Kristy, Zanaka lahy Tokana Tompontsika. Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria Virijiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin’ny fiainan-tsi-hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amena".</small>
Marihina fa tsy ny fiangonanaantokom-piangonana kristiana rehetra no manana fanekem-pinoana sy manaiky ireo fanakem-pinoana ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/975593"